Ihe kpatara Presales ji dị njikere ịnwe ahụmịhe nke onye na-azụ ahịa: nlele ime na Vivun
Cheedị ma ọ bụrụ na enweghị Salesforce maka otu ndị ahịa, Atlassian maka ndị mmepe, ma ọ bụ Marketo maka ndị na-ere ahịa. Nke ahụ bụ n'ezie ihe ọnọdụ ahụ dị maka ndị otu PreSales afọ ole na ole gara aga: otu a dị oke mkpa na usoro ndị mmadụ enweghị ụzọ emebere ha. Kama nke ahụ, ha ga-ejikọta ọrụ ha ọnụ site na iji ngwọta omenala na akwụkwọ mgbasa ozi. N'agbanyeghị nke a, otu ndị mmadụ a na-enwetaghị ọrụ bụ otu n'ime mmadụ kachasị mkpa na atụmatụ dị na B2B
Ụzọ 10 iji chọta ndị mmetuta zuru oke maka ika gị
Wednesday, June 29, 2022 Wednesday, June 29, 2022 0 by Amra Beganovic
Dị ka azụmahịa, ị maara na ịzụ ahịa influencer bụ akụkụ dị mkpa nke atụmatụ ịzụ ahịa gị. A sị ka e kwuwe, 92% nke ndị na-azụ ahịa tụkwasịrị obi na mgbasa ozi enwetara karịa ụdị mgbasa ozi ọ bụla ọzọ, na ahịa influencer nwere ike ịnapụta 11x dị elu ROI karịa ụdị omenala nke ahịa dijitalụ. Ma na ọtụtụ nhọrọ dị n'ebe ahụ, ọ nwere ike isi ike ịchọta otú ị ga-esi chọta ndị na-eme ihe zuru oke maka ika gị. Nke a bụ ndụmọdụ 10 ga-enyere gị aka ịchọta
Ngwa mgbakwunye SEO kacha mma WordPress: Rank Math
Wednesday, June 29, 2022 Wednesday, June 29, 2022 0 by Douglas Karr
Rank Math SEO Plugin for WordPress is a fechaa search engine njikarịcha ngwa mgbakwunye maka WordPress na-agụnye sitemaps, ọgaranya snippets, ọdịnaya analysis, na redirects.
Ihe kpatara azụmahịa gị ji kwesị ịdị na-aṅa ntị na nnabata CCPA
Omenala nke anwụ na-acha na California nke ama ama, na-agbaghasị ọrụ ya n'ịgbanwe mkparịta ụka mba n'okwu dị ọkụ site na ngafe nke iwu omebe iwu. Onye mbụ gafere ihe niile site na mmetọ ikuku gaa na wii wii ọgwụ gaa na iwu ịgba alụkwaghịm na-enweghị mmejọ, California na-eduga ọgụ maka iwu nzuzo data enyi na enyi. Iwu nzuzo nke ndị ahịa California (CCPA) bụ iwu nzuzo data nke United States kacha zuo oke ma nwee ike imenye ya. O siri ike ikwufe mmetụta ya na omume nzuzo. Kedu
WP Migrate: Ụzọ kachasị mfe iji kewaa otu saịtị pụọ na WordPress Multisite
Otu n'ime ndị ahịa anyị tolitere ruo n'ókè nke ụlọ ọrụ ha kewapụrụ na ụlọ ọrụ nne na nna ha. Ihe dị na ya bụ na ụlọ ọrụ nne na nna na-ejikwa akara ngosi ha niile site na WordPress Multisite. Kedu ihe bụ WordPress Multisite? WordPress Multisite bụ ọmarịcha ihe pụrụ iche wuru n'ime WordPress nke na-enyere aka ịhazi ya na ikike n'ofe netwọkụ saịtị n'otu nchekwa data na nnabata. Anyị rụrụ ọtụtụ ebe obibi
Otu esi ebufe okporo ụzọ na ntụgharị site na Social Media
Fraịdee, June 24, 2022 Fraịdee, June 24, 2022 Ann Smarty
Mgbasa ozi ọha na eze bụ ụzọ dị mma iji mepụta okporo ụzọ na mmata ika mana ọ naghị adị mfe maka ntụgharị ozugbo ma ọ bụ ọgbọ ndu. N'ezie, usoro mgbasa ozi mgbasa ozi siri ike maka ịzụ ahịa n'ihi na ndị mmadụ na-eji mgbasa ozi ọha na eze na-atọ ụtọ ma dọpụ uche n'ọrụ. Ha nwere ike ghara ịdị njikere iche echiche banyere azụmahịa ha, ọ bụrụgodị na ha bụ ndị na-eme mkpebi. Nke a bụ ụzọ ole na ole ị ga-esi kwọọ okporo ụzọ wee gbanwee ya ka ọ bụrụ ntụgharị, ire, na
Ndị na-agụ akwụkwọ m nwere ike ịghọta na anyị enyerela ọtụtụ ụlọ ọrụ mkpuchi ụlọ aka iwulite ọnụnọ ha n'ịntanetị, na-achọ ọchụchọ mpaghara ha, ma na-anya ụgbọ ala maka azụmahịa ha. Ị nwekwara ike icheta na Angi (nke bụbu Angie's List) bụ onye ahịa bụ isi nke anyị nyere aka na njikarịcha search engine ha na mpaghara. Laa azụ n'oge ahụ, ihe a na-elekwasị anya n'azụmahịa ahụ bụ na-eme ka ndị na-azụ ahịa jiri sistemụ ha kọọ akụkọ, nyochaa ma ọ bụ chọta ọrụ. Enwere m nkwanye ùgwù na-enweghị atụ maka azụmahịa ahụ